1 Beresosɛm 11:1-47
11 Ɛnna Israelfo+ nyinaa boaboaa wɔn ano baa Dawid nkyɛn wɔ Hebron+ bɛkae sɛ: “Hwɛ, wo dompe ne wo honam ne yɛn.+ 2 Efi tete, bere a Saul di hene no mpo, wo na wudii Israel anim de wɔn kɔe na wode wɔn bae;+ na Yehowa wo Nyankopɔn ka kyerɛɛ wo sɛ, ‘Wo na wobɛyɛn+ me man Israel, na wo na wubedi me man Israel anim.’”+ 3 Enti Israel mpanyimfo nyinaa baa ɔhene nkyɛn wɔ Hebron, na Dawid ne wɔn yɛɛ apam Yehowa anim wɔ Hebron, na wɔsraa+ Dawid de no sii Israel so hene sɛnea Yehowa asɛm+ a ɔnam Samuel so kae no te.+ 4 Ɛno akyi no, Dawid ne Israel nyinaa siim kɔɔ Yerusalem,+ kyerɛ sɛ, Yebusi;+ ɛhɔ na na Yebusifo+ a wɔwɔ asase no so te. 5 Ɛnna Yebusifo no ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Woremma ha!”+ Ne nyinaa akyi no, Dawid kɔfaa Sion+ abannennen no, kyerɛ sɛ, Dawid Kurow+ no. 6 Ɛnna Dawid kae sɛ: “Obiara a obedi kan akɔtow ahyɛ+ Yebusifo so no, ɔbɛyɛ otitiriw ne ɔsahene.” Seruia ba Yoab+ na odii kan kɔe, enti ɔbɛyɛɛ otitiriw. 7 Afei Dawid kɔtenaa beae a ɛhɔ kɔ yɛ den no.+ Ɛno nti na wɔfrɛɛ hɔ Dawid Kurow+ no. 8 Na ofii ase kyekyee kurow no nyinaa de fi Milo* ara de twaa ho hyiae, na Yoab nso siesiee+ kurow no nkae. 9 Na Dawid yɛɛ kɛse ara,+ efisɛ asafo Yehowa dii n’akyi.+ 10 Eyinom ne nnɔmmarima+ mu atitiriw a na wɔka Dawid ho. Wɔn na wɔne Israel nyinaa taa n’akyi denneennen wɔ n’ahenni mu, na wosii no hene sɛnea Yehowa asɛm+ a ɔkae wɔ Israel ho no te. 11 Dawid nnɔmmarima no din ni: Yasobeam+ a ɔyɛ Hakmonni bi ba, baasa no so panyin. Ɔno na ogyinaa ne nan so de peaw kunkum nnipa ahasa da koro.+ 12 Ahohi aseni+ Dodo ba Eleasar+ na odi hɔ. Ɔka nnɔmmarima baasa+ no ho. 13 Ɔno na na ɔka Dawid ho wɔ Pas-Damim,+ faako a na Filistifo aboaboa wɔn ano rebedi ako no. Ná asase bi da hɔ a atoko ayɛ so ma, nanso Filistifo no nti na nkurɔfo no aguan afi hɔ.+ 14 Na ɔtew gyinaa asase no mfinimfini ko gyei; okunkum Filistifo no, na Yehowa de nkonimdi+ kɛse gyee wɔn.+ 15 Na atitiriw aduasa+ no mu baasa kɔɔ Dawid nkyɛn ɔbotan mu, Adulam+ ɔbodan no mu, bere a na Filistifo no abɔ nsra wɔ Refaim+ asasetaw so no. 16 Saa bere no, na Dawid wɔ beae a ɛhɔ kɔ yɛ den+ no, na na Filistifo+ asraafodɔm nso wɔ Betlehem. 17 Akyiri yi, biribi yɛɛ Dawid akɔnnɔ, na ɔkae sɛ: “O sɛ anka merenya Betlehem+ kurow pon ano abura mu nsu anom a!”+ 18 Ɛnna baasa no bɔ wuraa Filistifo nsraban no mu, na wɔkɔsaw Betlehem kurow pon ano abura mu nsu, na wɔde brɛɛ Dawid.+ Nanso Dawid annom, na mmom ohwie guu fam maa Yehowa.+ 19 Na ɔkae sɛ: “Ɛmpare me sɛ mɛhwɛ me Nyankopɔn anim ayɛ saa! Mmarima a wɔde wɔn kra too wɔn nsam yi mogya+ na mennom anaa? Wɔn kra na wɔde too wɔn nsam kɔsaw bae.” Enti wannom.+ Eyi ne ade a nnɔmmarima baasa yi yɛe. 20 Yoab+ nua Abisai+ na ɔbɛyɛɛ baasa no so panyin. Ɔno na otumi gyinaa ne nan so de peaw kunkum nnipa ahasa; ná ɔwɔ din sɛ baasa no. 21 Baasa no mu no, na odi mũ sen baanu a wɔaka no, na odii wɔn so panyin; nanso wanto+ baasa a wodi kan no. 22 Yehoiada+ ba Benaia,+ ɔkokodurufo aseni no yɛɛ nneɛma pii wɔ Kabseel;+ ɔno na okum Moabni Ariel mmabarima baanu no. Ɔno ara nso na osian kokum gyata+ wɔ asubura mu da bi a sukyerɛmma tɔe no. 23 Ɔbarima yi ara nso na okokum Egyptni ɔbran bi a ne tenten yɛ basafa anum+ no. Ná Egyptni no kura peaw+ bi a ne kɛse te sɛ ntamanwemfo nsadua; nanso ɔde abaa kɔɔ Egyptni no so kohwim peaw no fii ne nsam, na ɔde ne peaw no kum no.+ 24 Saa nneɛma yi na Yehoiada ba Benaia yɛe, na onyaa din nnɔmmarima baasa no mu. 25 Ná odi mũ sen aduasa no, na mmom wanto baasa a wodi kan no.+ Nanso Dawid sii no ankɔbeahene.+ 26 Asraafo no mu nnɔmmarima ni: Yoab nua Asahel,+ Betlehemni Dodo ba Elhanan,+ 27 Harorini Samot,+ Pelonni+ Heles, 28 Tekoani Ikes ba Ira,+ Anatotni+ Abiesar, 29 Husani Sibekai,+ Ahohini+ Ilai, 30 Netofani+ Maharai,+ Netofani Baanah ba Heled,+ 31 Ribai+ ba Yitai a ofi Benyaminfo+ kurow Gibea+ mu, Piratonni+ Benaia, 32 Hurai a ofi Gaase+ subon no mpɔtam hɔ, Arbatni Abiel, 33 Bahurimni+ Asmawet, Saalbonni Eliaba, 34 Gisonni Hasem mma, Hararini Sagee ba Yonatan,+ 35 Hararini Sakar+ ba Ahiam, Ur ba Elifal,+ 36 Mekeratni Hefer, Pelonni Ahiya, 37 Karmelni+ Hesro, Esbai ba Naarai, 38 Natan+ nua Yoel, Hagri ba Miba, 39 Ammonni Selek, Berotni Naharai a ɔyɛ Seruia ba Yoab akodekurafo, 40 Yitrini Ira, Yitrini Gareb,+ 41 Hitini+ Uria,+ Ahlai ba Sabad, 42 Rubenni Sisa ba Adina, Ruben abusuakuw mu ɔpanyin a na okura nnipa aduasa; 43 Maaka ba Hanan, Mitini Yosafat, 44 Astarotni Ussia, Aroerni Hotam mma Sama ne Yeiel, 45 Simri ba Yediael, ne ne nua Tisini Yoha, 46 Mahawini Eliel, Elnaam mma Yeribai ne Yosawia, ne Moabni Yitma. 47 Eliel ne Obed ne Mesobani Yaasiel.
^ Hwɛ 2Sa 5:9 ase hɔ asɛm.